Burmese Classic (http://www.burmeseclassic.com/baydin1.php) | ဂန္တ၀င်
Home Myanmar Websites Myanmar Horoscope Website Burmese Classic (http://www.burmeseclassic.com/baydin1.php)
Burmese Classic Webpage ၌ဆရာကြီး ဒေါက်တာမင်းသိင်္ခ၏ တပည့်ရင်းဆန်းဗေဒင် အင်္ဂလက္ခဏာပညာရှင်ဆရာထွန်းမှ ရေးဆပ်တင်ပြသောခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် မြန်မာအပတ်စဉ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများကိုအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်သည်။Burmese Classic ၌ကံကြမ္မာနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မေးမြန်းလိုသော မေးခွန်းများကို ဆရာထွန်းထံသို့ sayartun@burmeseclassic.com သို့ရေးသားမေးမြန်းနိုင်စေရန် စီစဉ်ပေးထားသည်။
Burmese Classic, Horoscope
Burmese Classic Webpage provides Burmese horoscope by the Astrologist SayaTun who used to be under the tutelage of the most famous Astrologist Professor Min TheinKha. SayaTun also replies readers’ psychic questions which are sent on his email at sayartun@burmeseclassic.com.
Previous articleThe Irrawaddy (http://www.irrawaddy.org/business)
Next articleSaya Hein Tint Zaw (http://www.heintinzaw.com)
inngyinkhing Jan 4, 2015 at 4:38 am
မွေးနေ့ကတော့ ၁.၅.၁၉၉၄ ပါ အသက်က၂၀
ကျွန်မချစ်သူနာမည်က မောင်ထက်ပိုင်ကျော်ပါ မွေးနေ့ကတော့၆.၅.၁၉၈၈ ပါစနေသားဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိရန်ကုန်မှာမှာပါ လာမည့်၉လပိုင်းမှာဂျပန်ကိုလာဖို့လုပ်နေပါတယ် အဲဒါအဆင်ပြေမပြေရယ် ကျွန်မတို့လက်ထပ်ဖို့အဆင်ပြေမပြေရယ် ပြေခဲ့လျှင်လက်ထပ်ဖို့ရက်ရွေးပေးစေချင်ပါတယ်
htoo Oct 12, 2015 at 3:41 am
ကျွန်တော်နာမည် ထူးအံ့လွင်ပါ ၂၄.၉.၁၉၉၁ မှာမွေးပါတယ်
အဂါင်္သားပါ ကျွန်တော်ရဲ့ အချစ်ကြောင်းကိုမေးချင်လို့ပါ
hnin hnin aye Jan 7, 2016 at 6:33 pm
ဆရာကျွှန်မမွေးသက္ကရစ်က(22.6.1991)စနေသမီးပါ ကျွှန်မအမျိုးသားက (16,4.1989)ဘာနေ့သားလဲမသိပါ ကျွှန်မနဲ့သူနဲ့က သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် …သူကနိူင်ငံရပ်ခြားလူမျိုးခြားပါ သူက ကလေးနဲ့ကျွန်မကိုသူ့နိုင်ငံကိုခေါ်သွားဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် ကျွှန်မမိဘတွေက သဘောမတူကြပါ အဲ့ဒါ ကျွှန်မတို့ အတူပေါင်းစီးနေထိုင်ဖို့ဖူးစာ ပါသလား သိချင်ပါတယ်ဆရာ
hnin hnin aye Jan 7, 2016 at 8:38 pm
ဆရာကျွှန်မမွေးသက္ကရဇ်က(၂၂.၆.၁၉၉၁)စနေသမီးပါ ကျွှန်မအမျိုးသားက(၁၆.၄.၁၉၈၉)ဘာနေ့သားဆိုတာမသိပါ ကျွှန်မနဲ့သူနဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် ကျွှန်မအမျိုးသားက နိုင်ငံရပ်ခြားလူမျိုးခြားပါဆရာ သူကကျွန်မနဲ့သမီးလေးကို သူနိုင်ငံခေါ်သွားဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် ကျွန်မမိဘတွေက သဘောမတူပါဘူး သူနဲ့ကျွန်မနဲ့အတူနေထိုင်ပေါင်းသင်းဖို့ ဖူးစာ ပါသလားသိချင်ပါတယ်ဆရာ